सेक्‍सप्रति अरुचि भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी समाधान गर्नस् – Everest Dainik – News from Nepal
सेक्‍सप्रति अरुचि भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी समाधान गर्नस्
तपाई पनि तिनीहरु मध्ये एक त हुनु हुन्न, जो सेक्स गर्न त चाहान्छन् तर जव सेक्स गर्ने बेला हुन्छ त्यति वेला भने सेक्सप्रति अरुचि हुन्छ । यदि यस्तो भएको छ भने तपाई नआतिनुस् । किन यस्तो हुन्छ त्यसबारे पाँच कारण यहाँ बताउन गैरहेका छौं ।
मानसिक र शारीरिक तनाव
यदि तपाई कुनै प्रकारका मानसिक रूपमा तनावमा हुनुहुन्छ या शारीरिक समस्याग्रसित हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सेक्स प्रति रुचि हुदैन । यो दीर्घकालीन समस्या नभएर अल्पकालिन हो । यत्तिकैमा आत्तिनु पार्दैन । यस्तो अवस्थामा अन्य सबै कुरा भुलेर यौनजीवनमा एन्जोय गर्नु राम्रो हुन्छ । यस्तो गर्नले तपाईको मानसिक तनाव धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।
यदि तपाई आफ्नो शरीरसँग खुशी हुनुहुदैन या आफ्नो शरीरिक आकार ( मोटो वा पातलो) देखि तनावमा हुनुुहुन्छ भने पनि यौनप्रति अरुचि हुन्छ र सहज महशुश गर्नु हुन्न । त्यसैले यी र यस्ता कुरालाई विर्सिएर सेक्‍समा एन्जोय गर्नुपर्छ ।
अत्‍यधिक शारीरिक व्यायाम
यदि तपाईले पूरै शक्ति जिममा या व्यायाममा खर्च गर्नु भयो भने सेक्सका लागि शक्ति नै रहदैन । त्यसैले व्यायाम गर्नुस् तर आवश्यक जतिमात्रै ताकी सेक्सका लागि पनि आवश्यक शक्ति बचोस ।
महिनावारीको समयमा महिलाको शरीरमा सेक्‍स हर्मोनको कम हुन्छ । यस अवधिमा ओवरीले हर्मोन उत्पादन गर्न बन्द गरिदिन्छ । यसबारेमा तपाई पनि बुझ्नुपर्छ ।
यदि कुनै कारणबाट यौन साथीसँग मनमुटाव भयो या झगडा भयो भने पनि सेक्समा मज्जा आउदैन । आनन्द पूर्ण सेक्सका लागि शरीरिक मात्रै नभएर मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्छ । सेक्‍स एउटा मानसिक खेल पनि हो । दुवै जना बसेर आपसी असमझ्दारी हटाउनु राम्रो हुन्छ ।
ट्याग्स: Interest, sexual relation